Soomaliya oo ka qeybgashay shir ka furmay Koonfur Afrika | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Soomaliya oo ka qeybgashay shir ka furmay Koonfur Afrika
Soomaliya oo ka qeybgashay shir ka furmay Koonfur Afrika
Johansberg(SONNA) Kulanka furitaankiisa waxaa marti ku ahaa Madaxweynaha Dalka Sahraawi,gudgoomiyaha baarlamaanka ee dalka Chad,Wefdi ka socoda Soomaaliya Wasiirka Arrimaha dibadda ee dalka South Afrika iyo marti sharaf kale oo ka kala socday hey’ado iyo dowlado kale oo caalami ah.
Inta uusan kulanka furmin ayaa waxaa xarunta kulanka lagu dhaariyay xillibaanada cusub ee ka mid noqonaya xubnaha baarlamaanka Afrika, waxaana ka mid ahaa afar xilldhibaan oo ka socday Golaha Shacabka Soomaaliyeed,kuwaasi oo Baarlamaanka Afrika ku matalaya Soomaaliya.
Xillibaanada ka socda dalalka Bariga Afrika ayaa kulan gaar ah ku yeelan doona inta uu socdo kulanka waxaana shir guddoominaya xildhibaan Cabdi casiis c/llaahi Maxamed oo ka mid ah shanta xubnood ee ka socda Golaha Shacabka Soomaaliyeed waxaana xillkaan ay Soomaaliya soo heysay sanadahii ugu dambeeyay.
kulanka ayaa waxaa uu socon doona labada isbuuc ee soo socda,iyado xidhibaanada ay ka doodi doonaan qodobo dhowr ah oo hor yaala.
C/laahi Maxamuud Amiin(C/laahi Qorshe)
Previous articleKenya oo sheegtay in ay dishay xubno ka tirsanaa Nabad diidka Al-Shabaab
Next articleDab xoogan oo sababay dhimashada 10 qof oo ka kacay Mareykanka